Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » LGBTQ » I-2021 Honours ye-IGLTA yama-37 yeNgqungquthela yeHlabathi ibhengeziwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • LGBTQ • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iintshatsheli ze-LGBTQ + kwezokhenketho uMat Skallerud, i-LGBTQ eyaziwayo yokuhamba kunye no-Annette Kishon-Pines kunye ne-Atlanta Black Pride Weekend baya kuwongwa ngexesha leNgqungquthela ye-37 ye-IGLTA.
Intshatsheli yexesha elide ye-LGBTQ + yokhenketho uMat Skallerud uyakufumana iHanns Ebensten Hall of Fame Award.
Intsomi kwezokhenketho kunye ne-LGBTQ + ally evuthayo, uAnnette Kishon-Pines uya kufumana iAlly Award yokuqala ye-IGLTA.
I-Atlanta Black Pride Weekend izakufumana i-IGLTA's 2021 Pathfinder Award.
Ingqungquthela ye-IGLTA yama-37 yoNyaka yeHlabathi iqhubeka ngomhla we-8 ukuya kowe-11 kuSeptemba, kulo nyaka isenzeka okokuqala e-Atlanta, Georgia
Iintsika ezintathu ze-LGBTQ + kwezokhenketho, ukuthengisa kunye nokuxhobisa-i-Pink Media kaMat Skallerud, u-Annette Kishon-Pines wase-Belmond kunye ne-Atlanta Black Pride Weekend- bazokufumana kulo nyaka IGLTA Imbeko. Ekhethwe yibhodi yabalawuli yombutho, la mabhaso anikwa abantu okanye amashishini azibophelele ekuphuculeni imbonakalo yomhlaba I-LGBTQ + abahambi. Ii-Honours ze-IGLTA ziya kuziswa ngenkxaso yesisa yokundwendwela i-Philadelphia e Ingqungquthela yeHlabathi ye-37 ye-IGLTA, Cwangcisa i Ihotele Midtown, EAtlanta, 8-11 Septemba.
Intshatsheli yexesha elide ye-LGBTQ + yokhenketho uMat Skallerud uyakufumana i-Hanns Ebensten Hall of Fame Award, ebizwa ngegama lendoda ethathelwa ingqalelo njengoyise wokuhamba kwezitabane, kwaye igama lakhe linikezelwa nyaka ngamnye kwilungu elikhethekileyo le-IGLTA. USkallerud, umongameli wePink Media, waziwa ngokubanzi kwaye uyahlonitshwa ngomsebenzi wakhe ongadinwayo kuzo zombini amashishini okuhamba kunye nentengiso, kwaye yenye yeengcali eziphambili kwihlabathi kwintengiso ye-LGBTQ +. Ngaphezulu kweminyaka engama-20, uSkallerud uncede iinkampani zabo bonke ubungakanani ukuba bafikelele kubathengi be-LGBTQ + kwi-Intanethi kwaye ngoku kugxilwe ekunciphiseni ubuchule kwihlabathi liphela kuthengiso lwenkqubo, kwintanethi yenethiwekhi nakwiitekhnoloji zeWebhu 2.0. Owayengusihlalo webhodi ye-IGLTA, ungamandla aqhelekileyo kwiiNdibano zeHlabathi zoNyaka zeHlabathi, emva kokuba enze iintlanganiso zentengiso kwimidiya yoluntu kwabo bezayo. Wadala umsitho wokuqala wonxibelelwano kwimidiya ngaphakathi kwengqungquthela ye-IGLTA ngo-2008 eLas Vegas.
Intsomi kwezokhenketho kunye ne-LGBTQ + ally evuthayo, uAnnette Kishon-Pines uya kufumana iAlly Award yokuqala ye-IGLTA. Le Mbeko inikwa umntu, ishishini okanye umbutho othi, ngelixa ingeyiyo i-LGBTQ +, ubonakalise ukuzibophelela kwexesha elide ekukhuthazeni ukuhamba okubandakanya, ukunceda ukuphucula amava abahambi be-LGBTQ + kwihlabathi liphela. IKishon-Pines ichithe phantse amashumi amane eminyaka kwiqela elimangalisayo laseBelmond lokuhamba ngokunethezeka, isebenza njengomphathi wayo kunye nomlawuli wentengiso yelizwekazi laseMelika. Ngo-2015 waqesha umlawuli wokuqala ozinikeleyo we-LGBTQ ukuthengisa, kwaye emva konyaka wajonga ukuyilwa kweBhodi yeNgcebiso ye-LGBTQ, eyokuqala yolu hlobo kwishishini. Kuyo yonke iminyaka yakhe eBelmond, iKishon-Pines yanikela ngenkxaso yemvelaphi kubantu abaninzi Ukuhamba kwe-LGBTQ + abaququzeleli, imibutho yamalungelo oluntu kunye nemibutho yesisa, esebenza njengesibane sobudlelwane kumzi mveliso wokhenketho wehlabathi.
I-Atlanta Black Pride Weekend-enye yezona mibhiyozo mikhulu yokuzigwagwisa kwehlabathi-izakufumana i-IGLTA ye-2021 Pathfinder Award, enikezelwe kumntu, ishishini, okanye umbutho owenza igalelo elibonakalayo kwindawo abaya kuyo, kwaye ubonakalisa owona mgangatho uphakamileyo wobushushu kunye nokwamkela iindwendwe LGBTQ + yoluntu. Isithsaba somnyhadala ngumnyhadala ongajonganga nzuzo woMnyhadala woLuntu oShushu, obonelela ngesiganeko sangaphandle sokwamkelwa simahla esigcwele umculo, ukuzonwabisa, ukutya kunye nolonwabo, ngenjongo yokukhuthaza unxibelelwano, ukubonelela ngemizekelo emihle, ukuxhobisa bonke abantu, nokuchasa ucalucalulo ngaphakathi i-LGBTQ + kunye noluntu oluhlangeneyo. I-IGLTA ixhasa uMnyhadala woLuntu oShushu woBushushu kulo nyaka, ngokudibeneyo nendibano yawo.
Ingqungquthela ye-IGLTA yama-37 yoNyaka yeHlabathi iqhubeka ngomhla we-8 ukuya kowe-11 kuSeptemba, kulo nyaka isenzeka okokuqala e-Atlanta, Georgia.